वैज्ञानिकले गरे यस्तो चमत्कार जुन आजभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन, जानेर उड्नेछ तपाईको होश ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»बिज्ञान/प्रबिधि»वैज्ञानिकले गरे यस्तो चमत्कार जुन आजभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन, जानेर उड्नेछ तपाईको होश !
वैज्ञानिकले गरे यस्तो चमत्कार जुन आजभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन, जानेर उड्नेछ तपाईको होश !
By मनिषा थापा on ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०५:२५ बिज्ञान/प्रबिधि
पिएनपिखबर, भक्तपुर : यस विज्ञान क्षेत्रको ठुलो उपलब्धि नै भन्नुपर्छ किनभने आजभन्दा पहिला यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। तपाईले अहिलेसम्म अंगलाई आदान-प्रदानको बारेमा सुन्नु भएको छ तर तपाईले स्मरण शक्तिलाई फेरबदल गरेको बारेमा सुन्नुभएको छैन होला अब वैज्ञानिकले स्मरण शक्तिको फेरबदल गर्ने सक्ने क्षमता विकास गरेका छन्।
वैज्ञानिकले सफलतापुर्वक समरण शक्तिलाई स्थानांतरण गरेका छन्। वैज्ञानिकले यो अनुसन्धान समुद्री जीवमा गरेका थिए। अनुसन्धानद्वारा एक समुद्री जीवको स्मृतिलाई स्थानतरण गरिएको छ।
वैज्ञानिकको अनुसार यो भविष्यमा अल्जाइमर जस्तो घातक रोगहरुको उपचारको सहायक हुनसक्छ। आरएनए वा रिबोन्यूक्लिक एसिडलाई सेलुलर म्यासेन्जरको रुपमा चिनिने गरिन्छ जसले प्रोटिन बनाउँछ र कोसीकाको अन्य भागमा डीएनएको निर्देशन पुरा गर्दछ।
अब प्रोटिन कोडिंगको कोशीकाहरुको महत्वपूर्ण क्रियाहरुलाई राम्रो ढंग सम्झाउन मद्दत मिल्ने छ। यसमा कोशीका प्रक्रियाहरुको विकास, रोग र विनियमन रहेको हुन्छ। अमेरिकाको क्यालफोर्निया यूनिवर्सिटी र लस एन्जल्सको अनुशन्धानकर्ताले यो अध्धयन गरेका छन्।